नागरिकता विधेयक विवाद : संविधानका ४ वर्ष र समितिका ३४ बैठकमा कहाँ थियो कांग्रेस? पेचिलो सवाल छ- जहाँ कानुनमै महिला र पुरुषबीच विभेद गरिएको भनिएको छ। यसमा धेरैको चासो छ। यसमा अरु दुई सवाल उठ्छन्। पहिलो, के यो विधेयकले गरेको विभेद हो? दोस्रो, अन्यत्रै भएको विभेद विधेयकले समान बनाउन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो। मंगलबार, असार १६, २०७७
नागरिकता विधेयक : संशोधन र थप भए यी १५ व्यवस्था कांग्रेस र जसपा भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधानका पक्षमा उभिए। जहाँ महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समयावधि तोकिए... आइतबार, असार ७, २०७७
नागरिकता विधेयक : वैवाहिक अंगीकृतमा कांग्रेस स्पष्ट, नेकपा अनिर्णित सभापति श्रेष्ठले सहमतिको माध्यम तथा सरकारी धारणा पेश गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समय दिइन्। गृहमन्त्री थापाले नागरिकताको विषय... बुधबार, असार ३, २०७७
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको आइपिओमा ९७ हजार ३४४ को हात खाली मंगलबार, साउन २७, २०७७